Izy koa dia mivarotra fonony tsotra sy mora kokoa amin'ny London Sleeves.
Raha te hahita sary bebe kokoa ianao ary hahafantatra ny kaody fihenam-bidy Mamaky hatrany aorian'ny fitsambikinana:
Ny asan'ity mpamorona ity dia miavaka amin'ny fonosanaRehefa raisinao izany dia fonosina taratasy mahafinaritra toy ny fanomezana ireo ny fononao, ary arovan'ny plastika mangarahara. Rehefa manokatra azy ianao dia mahita a Famaranana miavaka amin'ny vokatra vita tanana amin'ny fitaovana voalohany, fahatsapana Alemanina 3mm. ary hoditra. Andao hojerentsika ny tranga iPad raha te hahita ireo tranga iPhone ianao Zahao ny hevitray amin'ny iPhone News.
Eto ianao dia afaka mahita ny iray amin'ireo modely izay amboariny, ny tsapa miaraka amina clasp ary miaraka amin'ny sombin-koditra izay rehefa entinao ny iPad-nao toa ny folder tsy manimba. Azonao atao ny mahita ireo sary lehibe kokoa amin'ny alàlan'ny fanindriana azy ireo, ny famaranana dia tsara.
Hita amin'ny loko manga, fotsy, volondavenona maizina, volondavenona sy mainty izy, ilay hitanao eto dia ny maodely volondavenona maivana.
Ary modely hafa izay ho hitanao ao amin'ny magazinao toy ny iray misy fehin-kibo amin'ny fametahana ary ny iray hafa tsy misy fametahana vy fa misy fehy hoditra tsotra ihany koa.
Ny tranga IPad dia mitentina € 40 ary ny vidin'ny fandefasana dia tsy mahatratra € 10 na aiza na aiza toerana alehanao.
Ny vidin'ny tranga iPhone dia manodidina ny € 20, ary ny vidin'ny fandefasana any amin'ny toerana rehetra eto an-tany dia tsy mahatratra € 5.
ihany koa Afaka mahazo fihenam-bidy 15% fotsiny ianao amin'ny maha mpamaky iPad News anao:
Ao amin'ny fivarotana Willow sy ny Orinasa tsy maintsy mampiasa ny kaody ianao WILLOWQUINCE
Ao amin'ny fivarotana Tanan'akanjo London ny kaody dia: LONDONQUINCE
Ao amin'ny fivarotana Willow sy ny Orinasa tsy maintsy mampiasa ny kaody ianao SHIP4FREE
Ao amin'ny fivarotana Tanan'akanjo London ny kaody dia: FREESHIPPING2011
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Willow sy ny orinasa: fonony tsapatsapa sy hoditra (fihenam-bidy 15% ho an'ny mpamaky anay)
Fitaovana atoro anao: telegrama sy charger